AMAKHITSHI AMANCINCI ANGAMA-26 ANEEKHABHINETHI EZIMHLOPHE - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Amakhitshi amancinci angama-26 aneeKhabhinethi eziMhlophe
Amakhitshi amancinci angama-26 aneeKhabhinethi eziMhlophe
Amakhitshi amancinci aneekhabhathi ezimhlophe anokunceda indawo yakho ukuba ibonakale inkulu, kwaye ikhanya ngakumbi, enokuthi yonyuse imeko-bume yegumbi lakho. Ngalo naluphi na uhlobo lwangaphakathi kunye nabuphi na ubungakanani bekhitshi, ukusebenzisa iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini kuya kubonelela ngenkangeleko ecocekileyo, entsha nenomtsalane eya kulungela incasa kunye nokukhethwa kwesitayile sabantu abaninzi. Kweli phepha legalari sibonisa iindlela ezahlukeneyo zekhitshi ezisebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zekhabhathi emhlophe.
Kutheni ukhetha umbala omhlophe wemibala ekhitshini? Abanye basenokuthi icace gca, iqhele kakhulu okanye iqhele kakhulu ngombala woyilo lwekhitshi, kodwa zininzi izizathu ezifanelekileyo zokuthandwa kwayo. Ngenye, ngumbala ongenangqondo, okuthetha ukuba uyakubonakala ulungile nakweyiphi na indlela yangaphakathi, nayo nayiphi na eminye imibala kunye noburhabaxa, kwaye ngekhe uphume ngesitayile. Ngaphandle kwesibheno sayo kwindalo iphela, umhlophe uthambekele ekuncedeni ukunika ukukhanya, ukuva umoya, kunye nokudala ukukhohlisa kwendawo enkulu, ke ngenxa yamakhitshi amancinci ngakumbi, ipeyinti emhlophe kwiikhabhathi zakho zasekhitshini ilungile njengoko ibonakala ngokwandisa ubungakanani beliphi na igumbi.
Iiringi zedayimani yokubandakanya idayimani
Kulo mfanekiso ungentla likhitshi lesitayile selizwe elinolwakhiwo olukhulu lokuzonwabisa kunye nabahlobo kunye nosapho ngelixa ulungiselela ukutya. Ikhitshi libonelela ngekhawuntari yeenkuni erhabaxa ejikeleze isitya esinefama esinefenitshala emhlophe. Ukuseta isinki kubonelela ngokudlula ngokulula ukusuka kwindawo yokutyela ephambili yendlwana. I-backsplash emhlophe emhlophe ekhanyayo ikhanyisa indawo kwaye inceda ukugcina izinto zikhanya.
Le khitshi encinci yegalari yongezwa ngokugqibeleleyo kule ndlu ye-rustic. Izinto zangaphakathi zanamhlanje zisebenzisa izinto ezimbalwa ze-rustic kunye neenkcukacha, ukuyinika imvakalelo efihlakeleyo, ukanti zigcina ukucoceka kwangaphakathi kwangaphakathi njengoko isebenzisa ukugqitywa okucacileyo kunye nemibala kwezinye iinxalenye zendlu. Ikhitshi lisebenzisa iikhabhathi ezilula ezifakwe ipleyiti emhlophe emsulwa, kunye nekhabhathi engaphezulu eneengcango zekhabhinethi yeglasi. Ukongeza ubume ngakumbi kunye nesibheno, iithayile zangaphantsi ezenziwe kwiglasi engwevu zazisetyenziselwa ukubuyela umva ekhitshini, ngelixa igrey & ilitye lesepha elimnyama lalisetyenziselwa i-countertop.
Eyona mibala ipeyinti mhlophe
Ukuthatha isigqibo sokuya kwiikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe kunokuba lula kwabanye ukuba bathi, de baqonde ukuba ipeyinti emhlophe ineentlobo ezininzi kunye nezandi onokukhetha kuzo. Njengawo nawuphi na umbala, ipeyinti emhlophe inokuza ngeethowuni ezipholileyo kwiitoni ezifudumeleyo, kwaye kuxhomekeke kwinkangeleko ofuna ukuyifeza ekhitshini lakho, kuya kufuneka ukhethe umthunzi ofanelekileyo omhlophe. Ngokuphuculwa kwetekhnoloji yokuxuba imibala, iintlobo ngeentlobo zeemveliso kunye nokugqitywa okukhoyo kwintengiso, ayimangalisi into yokuba ungoyiki.
Apha sidwelise ezinye zeyona mibala iipeyinti zixhaphakileyo nezaziwayo, phantsi kweempawu ezimbini zepeyinti. Ngethemba, olu luhlu lunokukunceda usinciphise isigqibo sakho kwaye ukhethe umbala ogqibeleleyo wekhabhathi yakho emhlophe ekhitshini.
I-White Designer - lo mhlophe uqaqambileyo unethoni epholileyo efihlakeleyo eya kuthi ngokuqinisekileyo inike ukuziva kwale mihla kunye nokuhlaziya kuyo nayiphi na indawo.
I-China White-njengoko igama lisitsho, lo mbala uphefumlelwe yimpahla yase China. Inobushushu obuphantsi / obufudumeleyo, obunika ukucoceka kodwa kungabonakali.
Imhlophe nje - lo mhlophe unesandi esiphantsi esifudumeleyo esityheli, esikunika ukubonakala okucocekileyo okwangoku, kunye nokuziva okuncinci kwasekhaya. Oku kuyakusebenza kuyilo lwangoku kunye noludala lwekhitshi
I-Super White-ngumbala omhlophe osicaba kunye nelizwi eliphantsi elingathathi hlangothi elihambisa umbala omhlophe ococekileyo.
IMascarpone - lo mhlophe unesandi esiphantsi esimthubi, esenza ukuba ubonakale uthambile kancinci kunokuba ngumbala omhlophe tyaba. Ilizwi eliphantsi elityheli eliphuzi liyinika isibheno solutsha, kodwa lisenako ukuhambelana nokubukeka kweklasikhi.
I-Lace ye-Chantilly - mhlophe opholileyo onetoni ephantsi enika imvakalelo ehlaziyayo nakweyiphi na indawo. Inika ukukhanya, umoya ovayo, kunye nolutsha olungenaxhala.
Ihobe elimhlophe - ukhetho oluthandwayo lombala omhlophe opeyintwe eludongeni, lo mbala awuthathi cala kodwa unexabiso eliphantsi le-beige & grey, elenza ukuba libukeke njengombala ompunga kakhulu ongadibanisi nasiphi na isitayile okanye uhambe kakuhle nakweyiphi na indawo.
Umhlophe omsulwa - ofana noBenjamin Moor weSuper White, lo ngumbala omhlophe ongathathi hlangothi ogqibeleleyo nasiphi na isitayile sangaphakathi.
I-Big Chill - umbala omhlophe ococekileyo onendawo etyheli / yetaupe ukunika iikhabhathi okanye iindonga zakho ukubukeka okufudumeleyo
Umhlophe ngeeperile - lo mhlophe unesandi esiphantsi kakhulu esimthubi ongayi kuqaphela ude uwubeke ecaleni komhlophe ongathathi hlangothi okanye opholileyo. Oku kufanelekile ukuba ufuna umbala omhlophe ococekileyo, kodwa ufumane umhlophe omhlophe ucabalele ukuba ungcamla .
Umhlophe we-antique-omnye umhlophe-ubumhlophe ubumhlophe kunye nelizwi eliphantsi elityheli. Oku kuhle kwinkangeleko yeediliya.
Iphepha elimhlophe-ngumhlophe opholileyo onethoni, njengoko igama lisitsho, ngokufanayo nombala wephepha elimhlophe.
Le mibala isebenza kakuhle kwiikhitshi ezincinci ezineekhabhathi ezimhlophe, kunye neendonga okanye isilingi, kwaye umhlophe ogqibeleleyo uya kuxhomekeka kwinkangeleko ozama ukuyifeza. Ungoyiki ukudibanisa abamhlophe nabanye, imibala eqinileyo, njengoko abamhlophe beya kuhlala bekhangeleka behle nantoni na. Ngomphezulu omkhulu omhlophe ofana nekhabhathi yekhitshi, ungazama ngokukhululekileyo imibala eyahlukeneyo, imibala kunye neepateni ukufezekisa uyilo lwakho lwekhitshi lamaphupha.
Le yenye ikhitshi encinci yegalari enexabiso elingakumbi kuyo. Iikhabhathi ezimhlophe ezicocekileyo zinoyilo olulula lwepaneli kunye nedreyini yesitayile seediliya etsala intsimbi engenasici. I-countertop isebenzisa i-marble emhlophe echazwe ngokuthe ngqo kwizinto eziphathekayo zeklasikhi, ngelixa i-backsplash isebenzisa iileyili eziluhlaza zeglasi.
Kumfanekiso ongentla luhlobo oluvulekileyo lwesicwangciso somgangatho wasekhitshini, kusetyenziswa iikhabhathi ezimhlophe. Ukusebenzisa umhlophe kuhlala lolunye ukhetho olufanelekileyo njengoko umbala udibanisa ngokulula kuyo nayiphi na into egqityiweyo kunye nemibala oyisebenzisayo kwamanye amagumbi endlu. Iikhabhathi ezimhlophe zesitayile esimhlophe sandisa indawo ephezulu yesilingi kwaye yongeza i-cornice ukugxininisa kwisibheno sayo esidala. Iindonga zazipeyintwe ngombala omhlophe wehobe ukuyinika ingcamango efihlakeleyo yegrey, eyaneleyo ukwenza umahluko phakathi kweekhabhathi ezimhlophe ezimhlophe kunye neendonga
Ikhitshi yelizwe elilula kakhulu elisebenzisa isikimu esimhlophe esimhlophe ukwenza ukucoceka, ukuziva okwakudala kule ndawo. Isebenzisa imigangatho yemithi yepayini enika ukufudumala kwindawo, ngelixa iindonga kunye neepaneli zayo zonke zipeyintiwe ezimhlophe ukufanisa umbala weekhabhathi ezimhlophe zasekhitshini. Kusetyenziswe ii-coutner ezimhlophe ezimhlophe, zidityaniswe nebrashi yentsimbi engenasici yokunikeza iikhabhathi ukubamba okwangoku.
Umhlophe uyathandeka kwindalo iphela kwaye ke, nangaphakathi nangaphezulu kunye nezinto ezincinci zangaphakathi, iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini ngokuqinisekileyo ziya kubonakala zilungile. Kule khitshi encinci ibekwe kwisicwangciso somgangatho ovulekileyo, isebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe ezimhlophe kunye nezinto zombane ezakhelweyo ngaphakathi ukujonga okucocekileyo. Isebenzisa i-push-to-open door kunye neendlela zedrowa ukujonga okucocekileyo.
Ukudibanisa imibala eyahlukeneyo kunye nemibala kulula ukuyenza ngakumbi xa uyidibanisa nendawo enkulu yemibala engathathi hlangothi, enje ngeli khitshi elisebenzisa ipeyinti emhlophe kwikhabhathi yalo yomthi. Iindonga ze-oatmeal, iithayile ezingwevu, zidityaniswe nesitripthi se-quartz esingwevu kunye nesitayile se-backsplash yesitayile asicaciswanga yindawo enkulu ehlala iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini, ezenza ukuba zonke zibonakale zihlangene ngaphandle kokwahluka.
Iikhabhathi eziphefumlelweyo eziphefumlelweyo zakudala zidityaniswe nesitayile sangoku esimnyama sokuqina komphezulu womgangatho kunye neethayile ezimhlophe zeglasi yokubuyela umva ukufezekisa oku kujongeka. Iikhabhathi ezimhlophe zasekhitshini zibukeka zintle ngokuchasene neendonga ezingwevu kunye nomgangatho wokhuni olunzulu.
Omnye umzekelo wekhitshi ephefumlelweyo yaseklasikhi esetyenziswe kwindawo yanamhlanje, iikhabhathi ezingaphezulu zisebenzisa isitayile esidumileyo somnini wewayini, esijongwa ikakhulu ngaphakathi naseFrance. Ipeyinti ye-mascarpone esetyenzisiweyo kwiikhabhathi idibanisa kakuhle kunye ne-dark wengue imigangatho yeplanga, isitopu esimnyama kunye neethayile ezibuyela umva ezimnyama nezimvi, zinceda ukulinganisela imibala ukuze ingabonakali mnyama.
Eli khitshi l-l lincinci linesiqithi esincinci ekhitshini embindini wendawo yokusebenza eyongezelelweyo. Ukusetyenziswa kweekhabhathi ezimhlophe ezifakwe ngamaplanga kumdlalo ofanelekileyo kumgangatho wendalo wepayini. Iindonga zazipeyintwe ngombala ongwevu, ke iikhabhathi zasekhitshini ngokwazo ziyabonakala ngaphandle, kodwa ayijongi ngaphandle kwendawo njengoko iibhodi ezisezantsi kunye neefestile zonke zimhlophe ngokunjalo.
Kwizithuba ezincinci ezinje, iikhikhini zesitayile sangoku zenza ukuba wandise indawo ekhoyo ukuze ikunike ibhalansi elungileyo yendawo yokusebenza kunye nendawo yokugcina. Lo mzekelo usebenzisa iikhabhathi ezimodyuli ezimhlophe ezimhlophe ezonyusa ukuphakama kwesilingi ukuze kugcinwe. Umhlophe ngumbala wokukhetha (ngaphandle kwe-backsplash esebenzisa ipeyinti emnyama emnyama) ngelixa unceda ukunika umbono wento enkulu. Iicocekile ezimhlophe ezicocekileyo zenza ikhitshi libukeke licocekile, licolile kwaye lala maxesha.
Ngendawo enqongopheleyo ekhoyo, eli khitshi lanamhlanje le-U lidibanisa ukusetyenziswa kwepeyinti emhlophe yoMyili kwiikhabhathi zasekhitshini kunye ne-matte emnyama yomphezulu womgangatho oqinileyo onqamlezayo onqamleze ngqo ukwenza ubudoda, ukuziva okwangoku. I-backsplash isebenzisa iithayile ezimhlophe zendlela ehamba ngaphantsi kunye ne-grouting encinci kwaye imxinwa ukubonakala okucocekileyo. Idrowa kunye nekhabhathi etsala ikwasebenzisa matte emnyama ukuthelekisa inkangeleko yetafile.
Ukuziva kulula kodwa kuhlaziya, le khitshi yanamhlanje isebenzisa iintlungu ezimhlophe zase China kwiikhabhathi zaso zasekhitshini ezilungiselelwe iplanga kunye nokuyibeka ngaphezulu ngombala ongwevu wokukhanya oqaqambileyo ophakamileyo ukuze zinike imbonakalo encinci. Idityaniswe ne-rustic mocha brown faux tile yomgangatho, ikhitshi elincinci ngokuqinisekileyo linika umxube olungileyo wokugqitywa okulula kunye ne-rustic.
Izitayela zangaphakathi zelizwe zikhangeleka kakuhle kwiikhabhathi zelizwe, kodwa ukuba ukhathazeka malunga nekhitshi lakho eliphuma ngaphandle, usebenzisa iikhabhathi zekhitshi ezimhlophe ezimhlophe lolona khetho lufanelekileyo, njengalo mzekelo. Ikhitshi eliqhelekileyo lisebenzisa iikhabhathi ezimhlophe ezimhlophe ezigcwele imabhile emhlophe kunye neethayile ezimhlophe zangaphantsi zendlela yokubuyela umva, ukujonga okungaphelelwa lixesha okuhambelana nezinto zangaphakathi inokuba yeyangoku, ilizwe, isiFrentshi, njl.
Kule khitshi yanamhlanje, kwasetyenziswa ipeyinti engwevu engwevu kwiikhabhathi zasekhitshini ukunika umahluko omncinci kwiindonga ezimhlophe kunye neefestile. Ipeyinti engwevu engwevu inika ubuqili kodwa okwangoku buhlaziyiwe kwiikhabhathi zeklasi ezifakwe ipaneli, kunye nokukhanya okukhanyayo nokuhlaziyayo. Ngokuqinisekileyo iyahamba kakuhle kunye neethayile zesreyithi ezingwevu kwimigangatho kunye nezitulo zokutyela ezenziwe ngentsimbi kunye neenkuni kunye netafile esecaleni.
Le khitshi yanamhlanje isebenzisa iintlobo ezimbini ezahlukeneyo zekhabhathi kwiimfuno zayo zokugcina. Ngelixa ikhitshi lalihlala libonakala lincinci ngokwalo ukongezwa kwesiqithi esincinci sentsasa yesonka sakusasa kuyonyusa ukubonakala kobume bekhitshi. Isiqithi sibonisa uyilo olunemigangatho emibini enendawo encinci yokulungiselela ukutya kunye nenqanaba elisezantsi lokutya-ekudleni.
Olunye uyilo lwangoku / lwangoku lwekhitshi oludibanisa imiphezulu yeetafile yokuhombisa engwevu kunye nekhabhathi emhlophe ecwecwe emhlophe ekhanyayo ekhangeleka icocekile kwaye intle. Iikhabhathi ezimhlophe zimi kakuhle xa kuthelekiswa nezinto zomgangatho omnyama ezisetyenzisiweyo, kwaye ikwahluke ngokungafaniyo kwiindonga ezimhlophe ezimhlophe.
Le khitshi yegalari entle idibanisa ikhabhathi elula eneepaneli ezahlukeneyo kunye neepateni kunye nokufezekisa ukufezekisa oku kujongeka kwangoku. Isebenzisa i-marble emhlophe kwi-countertop yayo, kunye neethayile ezimnyama ezimnyama ezikhethiweyo kwi-backsplash yayo, yokongeza ukuthungwa kwanamhlanje kunye nephethini ebusweni. Ikwasebenzisa ishedyuli yokubonisa ye-cantilever kunye nokukhanyisa okungaphantsi kwekhabinethi ukulungiselela umsebenzi ophezulu. Imigangatho isebenzisa ukugqiba iithayile zeceramic kumthi wepayini okhanyayo, kwaye ibekwe kwipateni ye-chevron, yongeza ubume ngakumbi kuloo ndawo.
Jonga itheyibhile yokulungiselela intsimbi engenasici efana nale modeli- Wayfair
Omnye umzekelo wekhitshi ephefumlelweyo ye-retro esebenzisa iklasikhi yesitayile esimhlophe esimhlophe, esidityaniswe nezicocekileyo, ezigqityiweyo zangoku ezinje nge-grey quartz countertop kunye neetayile ezimhlophe zendlela engaphantsi kwi-backsplash. Isebenzisa izixhobo zeediliya ezimnyama ukutshatisa iikhabhathi, kunye nokulungiswa kwesitayile sokuvuna njenge-apron ceramic sink kunye netepu.
Ikhitshi elimile okwe-L elisebenzisa iikhabhathi ezimodyuli ezimhlophe qwa, ezinceda ukuba zime ngokuchasene neendonga ezimhlophe zehobe. Iikhabhathi zasekhitshini zisebenzisa itafile yomphezulu eqinileyo ecekeceke emnyama ukuze ibonakale icocekile, ingenamthungo, idityaniswe neetayile ezimhlophe zangaphantsi kwendlela yokujonga iivini zangoku. Iikhabhathi ezingaphezulu zineminyango yeglasi yokubonisa imixholo yayo, kunye nendawo yokubeka iwayini evulekileyo.
Le khitshi yesitayile seediliya ngokuqinisekileyo iya kubonakala ilungile nakweyiphi na indlela yangaphakathi. Inee khabhathi zepeyinti ezimhlophe ezimhlophe ezisinika isibheno esingaphelelwa lixesha, esidityaniswe neenkcukacha zokuvuna ezinje ngee-beige granite counters, i-apron ceramic sink kunye nezinye izixhobo zeediliya.
Ikhitshi elihle lihamba nge-rustic vibe yanamhlanje kunye nekhabhathi ezimhlophe zekhitshi, kunye neenkcukacha zesitayile seediliya. I-countertop isebenzisa ibhloko eqinileyo ye-mahogany butcher, yongeza ukufudumala kunye nokuthungwa, ngelixa iindonga zagqitywa ngeethayile ezimhlophe zendlela. Kwiindonga, iintsimbi ezijingayo kunye neeshelfu zazibekwe, apho iimbiza zobhedu kunye neepani zaziboniswa ukugxininisa ukujonga kwe-rustic.
Le khitshi yegalari ngumzekelo omkhulu wokuphucula isitayile sasekhitshini sokudibanisa kunye nezinto zangaphakathi zangoku. Iikhabhathi zodidi oluphezulu zonke zazipeyintwe ngombala omhlophe ukwenza eminye imibala egumbini, njengeendonga ezingwevu, ukutyibilika kweenkuni ze-teak kunye neethayile zendlela yeglasi yangaphantsi kwe-aquamarine kwi-backsplash. Iikhabhathi ezimhlophe zonke zinceda ukulinganisela umbala ukuze ukujonga konke kuhlale kuhambelana, kwaye kujongeka njengangoku.
Eli khitshi lale gali linokubonakala limnyama ukuba alibonakalisi umgangatho wekhabhathi ezimhlophe ezipholileyo. Amagumbi okukhanya kwendalo anqunyelwe kwiglasi enye enqabileyo ekupheleni koyilo lwegalali. Olunye ubulumko luyekisiwe kwaye phantsi kwesibane sekhabhinethi lusetyenziselwa ukugcina igumbi likhanyisile. Ukuthinta okuncinci njengokuphakamisa itreyini kunye neengcango zeglasi ezinekhenkce kunokunceda ukwenza indawo ibonakale inkulu.
Iindonga ezipeyintiweyo zeMascarpone zidityaniswe nekhabhathi emhlophe e-China eyenziwe ngepeyinti yokwenza iklasikhi, yokuziva iivini kule khitshi lincinci. Eminye imibala efudumeleyo yayixutywe nayo, njengeplanga le-teak elisezantsi kwetheyibhile ye-quartz brown kunye neethayile zecream slate ezisetyenziswa kwi-backsplash.
Olu luyilo lwekhitshi lwanamhlanje olusebenzisa iikhabhathi zasekhitshini zemodyuli, ezinamacala amhlophe amhlophe, adityaniswe nezinye izandi ezibomvu. Eli khitshi ngokuqinisekileyo linika i-vibe ecocekileyo encinci, nanjengoko iidrowa zayo kunye neekhabhathi zekhuselo zisebenzisa ukutsala okumhlophe ngokujonga okucocekileyo. Ukugqitywa okumenyezelayo kwe-laminates kukongeza kwisibheno sayo sanamhlanje esincinci, ngelixa umbala obomvu unceda ukongeza isandi esibukhali sokwenza ukuba izinto zangaphakathi zibukeke zihleli.
Amanqanaba amaGilleries amaKhitshi amaNcinci aDibeneyo onokuwathanda:
Iingcinga zeKhitshi elincinci - Uyilo lweKhitshi elincinci - Amakhitshi amancinci eGalley - Amakhitshi amancinci aneekhabhathi eziMnyama - Amakhitshi amancinci anamhlanje
lowo ufumana umfazi
ukuba ubhale ntoni kwikhadi lomtshato lomtshato
imihombiso elula yomtshato yokwamkela
Nxiba umama womyeni